Hormuud News Sunday, April 22nd, 2018 | 02:58
[Monday, December 3rd, 12] :: Imtixaankii loo gali jiray qaadashada jinsiyada Denmark oo la baabiinayo
Denmark: Maanta isniinta ayaa laga yaabaa inay ugu danbayso, in tiro ka badan 2.500 oo qof oo ajinebi ah lagu imtixaamo aqoonta ay u leeyihiin bulshada iyo taariikhda Danmark, iyagoo ku talojira inay qaataan jinsiyadda deenishka, ayuu qoray wargayska Berlingske.
Dawladda ayaa dhab ahaan u diyaar ah, inay meesha ka saarto imtixaanka dhalashada deenishka (indfødsretsprøven), halkiisana ku bedesho imtixaan kale oo la yidhaahdo imtixaanka jinsiyadda deenishka (statsborgerskabsprøve), kaasoo sida ku xusan barnaamijka asaasiga ah ee dawladda "culays la saarayo nololmaalmeedka caadiga ah iyo siyaasadda taagan, ee dadwaynuhu kala kulmaan bulshada cusub".
Silsiladdii boqorrada oo meesha laga saaray
- Waxa aannu meesha ka saaraynaa qaabka uu maanta yahay imtixaanka dhalashada deenishku. Imtixaanka cusub ee halkiisa la gelinayo waxa si ka badan sida haddeer jirta culays la saari doonaa xaaladda bulshada deenishka.
- Qofka dib looga dooni maayo, inuu garanayo taariikhda Danmark, silsiladda boqorrada iyo dhammaan magaalooyinka gobolka Fuun. Gebi ahaan arrimahaas waa laga saaray meesha, ayuu wargayska Berlingske ku yidhi afhayeenka arrimaha dhalashada ee xisbiga Sooshal dimuqraadiga, Lennart Damsbo-Andersen.
Siyaasaddii ajinebiga ee dawladdii hore (VKO) oo la abbaaray
Dawladda talada haysa oo ka kooban xisbiyada S-R-SF ayaa soo bandhigaysa hindise cusub oo khuseeya imtixaan cusub ilaa bisha janewri, mana jiraan inta la og yahay warar faahfaahsan oo laga hayo waxyaabaha ay ka kooban yihiin isbeddeladan lagu samaynayo siyaasaddii arrimaha ajinebiga ay adkaysay dawladdii hore ee ka koobnayd xisbiyada Libaraalka iyo Konserfatifka.
Waxa kaloo isna wax yar la fududaynayaa imtixaanka af deenishka (danskkundskaber), halka aan la filayn inuu jinsiyadda deenishka helo qofka ay wasakhaysan tahay xaashidiisa denbila'aantu.
Qodob aan siyaasiyan micno samaynayn
Xisbiga Enhedslisten ayaa xoog u doonaya, in ajinebiga laga dhaafo imtixaanka.
- Ma qabno, inay macno samaynayso, in deenishnimada loo sameeyo qaacidooyin. Maaha wax la fahmi karo fikradda la xidhiidha, in qofka la imtixaamo, iyo inuu ku hadlo af deenish fasiix ah, ayay wargayska Berlingske ku tidhi afhayeenka arrimaha dhalashada ee xisbiga Enhedslisten, Johanne Schmidt-Nielsen.
Dhanka kale afhayeenka arrimaha dhalashada ee xisbiga DF, Christian Langballe, ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay, in meesha la saaro imtixaanka dhalashada (indfødsretsprøven).